नम्बर द्वारा सामाजिक नेटवर्क | Martech Zone
शुक्रबार, जुन 24, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
हिजो, हामीले मा एक सुन्दर इन्फोग्राफिक प्रदर्शन गर्‍यौं सामाजिक नेटवर्किंग को इतिहास। आज, हामी अर्को शानदार इन्फोग्राफिक - सामाजिक नेटवर्क को वर्तमान राज्य हो। यो आकार, जनसांख्यिकीय, र विकास द्वारा सामाजिक नेटवर्क को एक गहन ग्लोबल दृश्य हो - हामी एक संतृप्ति बिन्दु पुगेका छौं वा छैन केही मा अन्तरदृष्टि प्रदान। यो इन्फोग्राफिक शिष्टाचार हो सामाजिक मिडिया प्रज्वलित गर्नुहोस्.
एउटा चार्ट जुन गलत प्रभाव दिन सक्छ Ning, जसले यसको व्यवसाय मोडललाई सशुल्क नेटवर्कमा निःशुल्क बाट परिवर्तन गर्‍यो। अवश्य पनि उनीहरूले चालमा थोरै व्यक्तिहरू गुमाइरहेका थिए - तर वास्तवमा २०११ मा सफ्टवेयरको रूपमा सेवा सामाजिक नेटवर्क प्रदायकको रूपमा राम्ररी बढ्दैछन्।
जब Dilbert ले SEO चुटकुले बनाउँछ ...
जुन 24, 2011 मा 12: 08 PM
निश्चित रूपमा एक रोचक इन्फोग्राफिक, तर त्यहाँ कुनै संख्या थिएन। मलाई थाहा छ कि प्लाक्सो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबैभन्दा पुरानो डेमोग्राफिक समावेश छ, तर यो त्यहाँ केही हार्ड नम्बरहरूको साथ बढी उपयोगी भएको थियो।
डग साझेदारीको लागि धन्यवाद
जुन 24, 2011 मा 12: 20 PM
नमस्ते जेरेमी! डाटा र परिणामहरू इन्फोग्राफिकको तल सूचीबद्ध गरिएको रिपोर्टमा हुन्छन् (मैले पोस्टमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ! यो मा छ http://bit.ly/2011-social-analysis
मलाई इमान्दार राख्नुभएकोमा धन्यवाद!
जुन 24, 2011 मा 12: 44 PM
लिंक्डइनका लागि हुर्रे!